HGH ထိုင်းနိုင်ငံအတွက်ကိုယ်အလေးချိန် | အတွက်ဆုံးရှုံးအဆီအဘို့လူ့ကြီးထွားဟော်မုန်းကိုသုံးပါ
HGH ထိုင်းနိုင်ငံအတွက်ကိုယ်အလေးချိန် | ဘန်ကောက်မြို့ဆုံးရှုံးအဆီအဘို့လူ့ကြီးထွားဟော်မုန်းကိုသုံးပါ
ကြီးထွားဟော်မုန်း (somatotropin, HGH) လူအများစုအတွက် ထုိင္းႏုိင္ငံ ကြွက်သားအဆောက်အဦအားကစားသမားများ၏လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။ ကနေသည်အဆိုပါလမ်း - HGH ကြွက်သားကြီးထွားမှုကိုအားပေးအားမြှောက်, တစ်ဦးအားကြီးသောဟိုအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်, ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်ကခိုင်မာစေနှင့်ပင်စုစုပေါင်းပြန်လည်နုပျိုခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ခန္ဓာကိုယ်အဆီလျှော့ချဖို့စွမ်းရည်ဤအခွင့်အလမ်းများကိုအဘို့အများအားဖြင့်များ၏မျက်မှောက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပေမယ့်အချည်းနှီးဖြစ်ပါတယ် - အကြီးအပိုပေါင်ကိုမီးမရှို့ဖို့ကြီးထွားဟော်မုန်း။
ပုံဥပမာအားဖြင့်, သင်သည် 1998 လူကြီးများ 24 ၏နေ့စဉ်ထိုးလက်ခံရရှိထားတဲ့အတွက်2အတွက်ဘန်ကောက်တက္ကသိုလ်ကလေ့လာမှုမှဖွင့်နိုင်ပါတယ် MG -5ခြောက်လ HGH MG ။ ဤကာလအတွင်းသူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဒြပ်ထုလျော့ကျခဲ့ပါဘူး, ဒါပေမယ့်ကြွက်သားများနှင့် adipose တစ်ရှူးများအကြားအချိုးသိသိသာသာပြောင်းလဲသွားပြီ - ပျမ်းမျှအားဖြင့်တစ်ဦးချင်းစီပါဝင်သူကြွက်သားများ 5.5 ပေါင်ရရှိခဲ့နှင့်အရေးအကြီးဆုံးကတော့, အဆီ 5.7 ကီလိုဂရမ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ ထိုအခါအကြီးမြတ်ဆုံးအဆီဆုံးရှုံးမှုဝမ်းဗိုက်ထဲမှာမှတ်သားခဲ့သည်။ အံ့သြစရာမဟုတ်ပါနောက်ဆုံးသောကာလက Genotropin, jintropin နှင့် ansomone နှင့်ခန္ဓာကိုယ်အဆီရာခိုင်နှုန်းလျှော့ချရန်ရှာသောသူအများအပြားအားကစားသမားများအတွက်ရွေးချယ်မှုအခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများကြီးထွားဟော်မုန်းအဖြစ်မူးယစ်ဆေးဝါးများဖြစ်ခဲ့သည်။
HGH ၏ဆီဥကိုမီးရှို့ဂုဏ်သတ္တိများ၏ကြီးမားသောအစိတ်အပိုင်းဇီဝြဖစ်အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ ဇီဝြဖစ်ကကောင်းစွာလူ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာနီးပါးမည်သည့်ဆဲလ်ဖက်တီးအက်ဆစ်သို့မဟုတ်ဂလူးကို့စဖြစ်စေခြင်းဖြင့် powered ကြောင်းလူသိများသည်။ လျှင်သွေးထဲမှာဂလူးကို့စပမာဏကိုကြီးထွားဟော်မုန်းအတွက်ဟိုအင်ဆူလင်ဟော်မုန်း, ဖက်တီးအက်ဆစ်ပမာဏကိုနေဖြင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ထားသည်။ သငျသညျအဆီ၏အလေးချိန်အရှုံးနှင့်လျှော့ချရေးအောင်မြင်ရန်ချင်သောရည်မှန်းချက်, ဂလူးကို့စထက် ပို. အဆီစားရန်ဆဲလ်အတင်းရန်ဖြစ်ပါသည်။ အင်ဆူလင်အဖြေမဟုတ်ပါဘူး - ဒါဟာသာမန်အဆင့်မှာဂလူးကို့စစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်လူတွေထဲမှာသိုလှောင်ပါသည်။ မည်သည့်ကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ဒါကြောင့်ဆဲလ်တွေတစ်ပြိုင်နက်တည်းအသည်းထဲမှာဖက်တီးအက်ဆစ်ဖွဲ့စည်းရေးတိုးပွားလာသောဂလူးကို့စမဟုတ်, အဆီစားရန်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
သို့သော်အင်ဆူလင်၏ရန်တစ်ဦးကြင်ကြင်နာနာဖြစ်ခြင်း HGH, ဆဲလ်ဂလူးကို့စများအသုံးပြုမှုကိုလျှော့ချခြင်းနှင့်ဖက်တီးအက်ဆစ်စားရန်သူမ၏အတင်းဖို့ကြိုးစားနေသည်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့ကအဆီဆဲလ်အမြှေးပါးမှာသူ့ဟာသူမြှပ်ထားမှုနှင့်သွေးသို့သူတို့ကိုငါဆောင်ခဲ့ဖက်တီးအက်ဆစ်မှသူတို့ကိုယူကြောင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်ကအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်, သူတို့အောက်စီဂျင်ကိုပေးသည်။ တနည်းအားဖြင့်ဒါဟာအဆီဆဲလ်အရေအတွက်ကိုလျှော့ချဆိုလိုသည်မှာ lipolysis ၏ဖြစ်စဉ်ကိုပြန်သွားလေ၏။ နှင့်အရေးအကြီးဆုံးကတော့မရှိ HGH အဆီဆဲလ်တွေပဲသူ့ရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအရှုံးမပေးမည်မဟုတ်နှင့်ဖကျြဆီးခံရဘူး။ ဒါပေမယ့်ခန္ဓာကိုယ်လျှင်ဆဲလ်တွေပိုပြီးဖက်တီးအက်ဆစ်လိုအပ်ပါတယ်နှင့်ကြီးထွားဟော်မုန်းတိုး၏အရေးယူမှုအောက်မှာအဆီဆဲလ်များပျက်ပြားခြင်း, သိုက်ကနေအဆီ၏စည်းရုံးခြင်းကိုယ်အလေးချိန်ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြပါလိမ့်မယ်အရာ, ကိုတိုးပွါးစေပါလိမ့်မယ်။ သင်အမှန်တကယ်အနှစ်ချုပ်လိုပါကခန္ဓာကိုယ်ပဲသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အဆီစားရန်စတင်သည်။ ဤရွေ့ကား, အဘို့, ပထမဦးဆုံးနှင့်အဓိက, သင်ကြီးထွားဟော်မုန်းတစ်ခုလုံလောက်သောငွေပမာဏကိုလိုအပ်ပါတယ်။
အကောင်းဆုံးအလေးချိန်ဆုံးရှုံးမှုများအတွက်သင်တန်းကာလအတွင်းသောက်ရန်အကြံပြုသည်နှင့်အခြားကိုယ်အလေးချိန် - တိုးတက်မှုနှုန်းဟော်မုန်းနီးပါးသူတို့ကိုမဆိုနှင့်ပဍိပက္ပါဘူး။ အထူးသဖြင့်ကောင်းစွာသိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်းဥပမာ thyroxine (100-150 μgနေ့စဉ်) သို့မဟုတ် triiodothyronine (25 μgနေ့စဉ်) ။ မသာသူတို့ကိုယ်တိုင်အားဖြင့်အဆီ burners တွေက, ဒါပေမယ့်လည်းသိုင်းရွိုက်ဂလင်းအပေါ်တစ်ဦးအကျိုးရှိသောသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ ထိုအခါကြီးထွားဟော်မုန်း၏သင်တန်းတွင်သူမကလိုအပ်ပါတယ် - HGH ယင်း၏ function ကိုဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်နှင့်ဤကာလအတွင်းသိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်းဖြစ်နိုင်တဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတို့၏ပေါ်ထွန်းခြင်းလျှော့ချရန်ကူညီပေးပါမည်ဒါကြောင့်ပင်၎င်း၏တိုးဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြလိမ့်မည်။
တကယ်တော့, HGH လူ့ခန္ဓာကိုယ်များအတွက်သဘာဝပါပဲ။ ပြင်ပအတော်လေးအန္တရာယ်ကင်းဖြစ်ရပ်ဆန်းကြည့်ထံမှ HGH ရယူ၏ပြန်လည်အပေါင်းတို့ကိုပိုပြီးဒါကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဟော်မုန်း၏လွတ်လပ်သောနှိမ်နင်းမရသည့်အခါဒါမှဥပမာအားဖြင့်, အသက်အရွယ်နှင့်အတူလူသားများအတွက်၎င်း၏ "ကိုယ်ပိုင်" အသံအတိုးအကျယ်, လျှော့ချဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည် HGH ၏အနည်းဆုံးဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာမကြာခဏ (အကျိုးသက်ရောက်မှုဆင်တူဖြစ်တယ်, တစ်ဦးချင်းစီ၏တူညီသောအုပ်စုများနှင့် ပတ်သက်. ကိုအသုံးပြုသည်) စတီရွိုက်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါနေသည်, သို့သော်လိင်ဟော်မုန်းများထုတ်လုပ်မှုကိုအကျိုးသက်ရောက်ဘူး, အရေးယူတဲ့နေရာမှာမတူညီတဲ့ယန္တရားကြောင့်လျော့နည်းမနှစ်မြို့ဖွယ်အကျိုးဆက်များရှိပါတယ်။ ကြီးထွားဟော်မုန်းတစ်ခုသင်တန်း Post-သံသရာကုထုံးအဘို့မလိုအပ်ပါပြီးနောက်ဒါ့အပြင်ဒါဟာလညျးမိမိဘေးကင်းလုံခြုံမှုနှင့် ပတ်သက်. ပြောပြသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံထဲမှာအလေးချိန်ဆုံးရှုံးမှုများအတွက်ကြီးထွားဟော်မုန်း၏အသုံးပြုမှုကိုတစ်ဦးနား၏တိုး, နှာခေါင်း, ပါး, လျှာ, အရိုးနု, (ဆစ်၏အဆစ်များ၏အရပ်တွင်အရုပ်ဆိုးပြန်တယ်၏အသွင်အပြင်နှင့်အတူ) အရိုး, နှလုံးမှဦးဆောင်မယ့်ဒဏ္ဍာရီလည်းမရှိ နှင့်အခြားပြည်တွင်းရေးကိုယ်တွင်းအင်္ဂါကို (ဥပမာထဲမှာပေးထားတဲ့ "ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာယဗလ" အလောင်းတွေစိုက်ပျိုးယခုတွေကတော့ဝမ်းဗိုက်ပြူးလာပြီးကြသူပရော်ဖက်ရှင်နယ်အားကစားသမားများမှာ) ။ ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုအမှန်ပင်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါသည်, သို့သော်သင်အကြံပြုဆေးညွှန်းများသိသိသာသာပိုလျှံနှင့်အတူမူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးစားတဲ့အခါမှသာ။ အလားတူအရှုံးအလေးချိန်တစ်ဘုံအသုံးပြုမှု HGH မ။